DAAWO SAWIRADA:-Nolol Naxdin Leh ay ku Nool Yihiin Qoys Aabahooda ay Ciidamada AMISOM Si Arxan Daro Ah Muqdisho Ugu Dileen | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
DAAWO SAWIRADA:-Nolol Naxdin Leh ay ku Nool Yihiin Qoys Aabahooda ay Ciidamada AMISOM Si Arxan Daro Ah Muqdisho Ugu Dileen
Published: March 16, 2014, 6:55 pm
Meeshu waa magaalada Muqdisho, Waddada Makka Al-mukarama, meel ku dhaw Hotel Ambassador, Xilligu waxa uu ahaa 9:00 am, 28-kii January 2014-ka, markii laba Gaari oo ay wateen ciidamada Nabad-ilaalinta Soomaaliya ee loo yaqaan AMISOM ay si arxan-darro ah ku jiireen nin magaciisa la odhan jirey Saalax Nuur Maxammed oo dhanka koofur u goynayey Laamiga hormara Hotelka Ambassador, ee u dhaw Trepiano. Waxa uu iska fiirinayey Saalax markii uu waddada gudbayey dhanka bidixdaa oo Gawaarida ka soo socoto.
Hase yeeshee, isla xilligaa waxa ay ka yimaadeen dhanka Midigtaa iyaga oo xawli ku socda, isla markaana marayey Waddo khaldan. Marxuun Saalax isaga oo aan iska eegin dhanka Midig, maaddaama uusan Gawaari ka filayn ayuu soo galay waddadii.
Xarunta Calikaar ee Nabadda, Xuquuqul Insaanka iyoTala-wadaagga ee loo yaqaan (APHAD) ayaa waxay isku dayday in ay xaaladda reerkaas u dhabba-gasho, waxayna booqosho ku tageen Gurigii reerku uu ka dagganaa Magaalada Muqdishu, gaar ahaan xaafadda Maajo ee Dagmada Waaberi. Waxaan la kulannay Xaaskii Marxuum Saalax, Marwo Xakiimo Xuseen Aadan oo aad u murugeysanayd iyo carruurtii ay u dhashay oo 9 ahaa (3 wiil iyo 6 gabdhood) oo iyaguna ka muuqatey diif, murugo iyo ka-wal-walka xaqii Aabbahood iyo Mustaqbalkooda. Waxaa kaloo guriga joogey 6 carruur ah oo kale oo agoon ah oo Saalax walaalkiis dhalay oo noloshooda iyo wax-barashadooda uu isagu gacanta ku hayey.
Marwo Xakiimo waxay inoo sheegtey in Saalax ahaa nin ay aad u jeclayd waqti ka badan 25 sano ay isla soo qaateen, waxay ahaayeen Qoys ka soo jeeda Qabiilka Beesha Jareer, waxay sidoo kale inoo sheegtey in ay ku noolaayeen waxa uu soo shaqeeyo Saalax oo ahaa Taxi-le biilka iyo nolosha qoyska ka soo saari jirey Taxi kiro ah. Saalax Qoyska noloshiisa kaliya kuma dadaali jirine, wuxuu kaloo soo-saari jirey oo aad ugu dadaali jirey carruurta Wax-barashadooda, waxayna reerku ku noolayeen nolol ay aad ugu faraxsanaayeen xilligaas.
Marwo Xakiimo ayaa inooga warrantay Dhacdadaas, waxay tiri iyadoo sheekeynaysa “Saygayga Saalax, waxaan subaxaas ku ballansanayn in aan aadno Xamar Weyne oo aan soo booqanno qaar ka mid ehelada yada iyo in aan ka soo adeeganno Suuqa Xamar Weyne, wuxuu isoo wacay daqiiqado ka hor inta uusan dhiman isagoo I yiri diyaar-garow waan kuu imaanayaaye, hase yeeshee markaan isku diyaariyey in aan baxo, ayaa waxaa ii yimid wiil ordaya oo dhahaya Saalax waa dhintay isla markiiba meeshii ayaan ku dhacay waana miyir daboolmay waxaana la ii qaadey meeshuu ku dhintay, waxaan arkay isagoo Mayd ah oo ay si xun Gawaarida AMISOM Madaxa uga mareen, oo Maskaxdisii Laamiga dhexdiisa daadsanayd.
Meeshii ayaa iska ag fariistey, waana la hadlayey anoo u qabey in uu ila hadli karo, hase yeeshee dadkii ayaa laamigii iga qaaday oo I geeyey meel hoos ah aniga iyo qaar ka mid ah carruurteydii. Waxaana meeshaas isugu soo baxay Soomaali badan oo muddaaharaadaysay, oo diiddanayd in Maydka Saalax la qaado ilaa la keeno dhagar-qabaye yaashii Marxuumkaas dilay, laakiin Police ayaa yimid oo dadkii xabbado ku furey si ay u kala cayriyaan. Aniga iyo carruurtaydii iyo qaar.
kaloo ka mid ahaa Shacabkii Muddaaharaadayey maysan cararin, waxaana ku adkaysannay in la keeno dadkii Marxuumkaan dilay. Waxaa markii dambe naloo sheegey in la soo qabtey dhagar-qabeyaashii, xaqii Saalaxna la bixinayo, markaas ayaan oggolaanay in Maydka la qaado lana soo aaso. Runtii waxay ii ahayd Qiyaame igu soo dumay maalintaas ilaa iyo haddana maskaxdaydu caadi ma ahan, waana isla had-hadlaa, waxaa igu badan Walaaca, qarowga, riyo naxdin leh iyo xasuus xanuun badan leh”
Xakiimo, ka soo sokow ninkii adduunka ay ugu jeclayd ee ay wayday, waxay aad uga wal-walsanayd helitaanka Xuquuqdooda, Nolosha qoyskeeda agoonta ah, Wax-barashadooda iyo Mustaqbalkooda. Si ay nolosha asaasiga ah ee qoyska u dabbarto, waxay bilowday in ay soo amaahato Makiinadda dharka lagu tolo oo ay gurigeeda keensato si ay xaafadaha dariska ah ay dharka ugu tosho, iyadoo qaadatey dhawr beri oo tababar ah – welina ay tababarkii ku jirto – waxaana ku arkay xoogaa dhar ah oo loo keensaday in ay Tosho.
Waxay inoo sheegtey in aysan weli helin Macaamiil ku filan, Makiinadduna ay tahay mid la soo isticmaalay. Waxay kaloo ka fekaraysay in ay hesho wax uun shaqo ah oo reerka ay ku sii dabbarto, laakiin maysan helin dad ka caawiya nolosha iyo shaqo-heliddaba. Marka ay sheekeynaysaba waxaa ku soo joogsanaysay ilmo, taasoo marna ay ku soo dhacaysey ninkeedii Musiibada ku dhacday, marna ay xasuusanaysay sida ay xaqqii ninkeedii dhintay mugdiga u galay, marna mustaqbalka iyo la hardanka nolosha cusub ay milicsanaysay.
Waxaa sidoo kale inoo warramay Haaruun Saalax oo 17sano jir ah, dhigtana fasalka 8aad, oo isna dareemey dhibaatada ay agoonnimadu leedahay, wuxuu yiri “ Waxaan maqli jirey hebel waa agoon, mana fahansanyd waxa ka maqan dadk agoonta ah, laakiin maantaan ogaaday; aabbahay markuu dhintay, waxaa ciriiri gashay noloshayadii, Wax-barashadayadii iyo Mustaqbalkayagii, waxaana maanta ka fakaraynaa waxaan cunno, waxaana taas nabadday AMISOM, oo aabbahay oo noolashayadii ahaa na dhaafisey, xaqiisiina naduudsiinaysa.
Waxaa na dishay maalin kasta soo laabta, annaga oo taas ku wareersanayn ayaan waxaan helnay macluumaadyo dad hore oo Gawaaridoodu mareen oo qaarna dhinteen, qaarna naafo yihiin oo ilaa iyo imminka waxba aan loo qaban, markaas ayaan candhuufteennii dib u liqnay, soo laabtana waa daalis iyo inta niyad jabaan ha iska samreen sida dadkii hore. Maanta Aabbana ma haysanno, xaquuqdayadiina maanaan helin, qaraabo hanti lehna ma lihin, cid kale oo na caawinaysana ma haysanno –xitaa qareen waa waynay nacaawiya- meel aan nolosha ka bilawnana garan mayno”.
Waxaan sidoo kale la kulannay Odayaasha Dhaqanka beesha Saalax, waxay inoo sheegeen in ay SAMIR ka taagan yihiin helitaanka Xaqa Saalax, waxay lahaayeen “Dawladda ayaa nagu tiri annaga ayaa Xaqii ka keenayna AMISOM oo mar hore naga ballan-qaadday, waxayna maalin walba lee yihiin berri soo laabta waa la helayaa xaqiiye, waxayna hadda ku dhaw dahay labo BIL, wax natiijo ahna kama haynno, waxaana hadda ka taagannahay QUUS, wax naga caawiya sidii Xaqa loo heli lahaana ma haysanno, Dawladdii Soomaaliyeedna waxba waa inoo qaban wayday, mana naqaan meel lagala xiriiro AMISOM.
Waxaan u malaynaynaa in haddii aan ahaan lahayn Qabiilaadka xoogga badan, in warka yaga la dhageysan lahaa, laakiin Qabiilkaan nahay ayaan u malaynaynaa in aan wax ku waynay”, waxay intaas sii raaciyeen “Hadda waxaan isku dayeynaa in aan ciddii wax heli karta aan reerka wax u waydiino xaqaasna ka samirno”.
Reerka Saalax ka tagey oo ah reer xaas ah oo ballaaran oo u muuqday reer tabaalaysan, oo musiibada adduunyadu taabatay, lana daris noqday murugo iyo niyad-jab soo wajahday, ayaa waxay haatan u
baahan yihiin taageero gudaha ah iyo mid caalami ah oo ku taban taabiya helitaanka xaqoodii. Waxay u baahan yihiin Qareenno gudaha ah iyo kuwo caalami ah oo u qareema una dooda Xuquuqdooda.
ALIKAR CENTER FOR PEACE HUMAN RIGHTS & DEMOCRACY (APHAD)
DAAWO SAWIRADA:-Aaskii Qaran ee Muqdisho Loogu Sameyay Marxuum Tubeec
Mo Farah Oo Cusbitaal Loo Qaaday (Maxaa Ku Dhacay?)